विमान चढ्दा सिंढीमा दुईपटक ल’डे राष्ट्रपति बाइडेन !…. भिडियो सहित – eSidhakura
मुख्य पृष्ठअन्तरास्ट्रियविमान चढ्दा सिंढीमा दुईपटक ल’डे राष्ट्रपति बाइडेन !…. भिडियो सहित
वासिङ्टन डीसी-अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई एयरफोर्स वान चढ्ने क्रममा सिंढीमा ठे’स लागेको छ । उनी दुईपटकसम्म अ’ल्झिएका थिए ।एकपटक अ’ल्झिएर उठ्न खोज्दा उनी अर्कोपटक झन् बेसरी अ’ल्झिएका थिए । उनी झण्डै सिंढीमा नै बस्ने अवस्था आएपनि स’म्हालिएर उठेका थिए ।
उठ्नका लागि केहीबेर सं’घर्ष गर्नुपरेको थियो । त्यसपछि माथि पुगेर स’लाम गदैै उनी विमानभित्र छिरेका थिए ।ह्वाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरीले राष्ट्रपति बाइडेन शतप्रतिशत सकुशल रहेको र कुनै चो’टपटक नलागेको बताएकी छिन् । एकदमै हावा चलेकाले आफू समेत सिढीमा झण्डै नलडेको उनले बताइन् ।
त्यतीबेला उनको खुट्टा म’र्किएको थियो । कुकुर मेजरसँग खेल्ने क्रममा उनको खुट्टा म’र्किएको थियो । उक्त खुट्टामा आज पुन चो’ट लागेको नलागेको बारे केही बताइएको छैन ।डाक्टरले कुनै चे’कअप गरे नगरेको लगायतका प्रश्नहरु गर्दा ह्वाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरीले बाइडेन ठीकठाक रहेकोमात्र दोहोराइन् । बाइडेनका कुनै पनि कार्यतालिकाहरु र’द्द नगरिएको जनाइएको छ ।भिडियो